Anbotek Magetsi Kudzivirirwa kweLabhoritari ndeimwe yemarabhoritari ekutanga ekambani kupa kuongororwa kwekuchengetedzwa uye kupihwa zvitupa kumabasa akasiyana siyana mukutengesa nekugara magetsi nemagetsi zvigadzirwa. Sangano rekuyedza reAnbotek rave nemidziyo yekuyedza yepamusoro uye zviridzwa Iyo ine hupfumi ruzivo mune yekuchengetedza mainjiniya uye anopfuura makumi maviri ehunyanzvi mainjiniya mainjiniya, ayo anogona zvizere kusangana nezvinodiwa zvevatengi kuyedza uye chitupa.
Rabhoritari Unyanzvi Kutanga
Batsira vatengi mukubvisa zvingangoitika zvekuchengetedza panguva yekugadzirwa kwechigadzirwa, senge kubvumidzwa, chinhambwe chinhambwe, uye kuongorora dhizaini dhizaini kudzivirira kurasikirwa kweforoma kuchinjwa.
Fambisa kuongororwa kwemagetsi, kuongororwa kwemahara, uye kuendesa gwaro rekuongorora kweye pre-chigadzirwa certification chikamu.
Kutaurirana nebazi rechitupa uye uite panzvimbo yemutengi kuti aite zvinyorwa zvekunyorera, izvo zvinogona kuchengetedza nguva yekushandisa uye kudzikisira matambudziko kune vatengi mukuita kwekunyorera.
• Batsira vatengi mukubata kuongorora kwefekitori uye batsira kugadzirisa mibvunzo inowanikwa mukuwongorora kwefekitori. Batsira vagadziri kuitisa KUSANGANA kwevashandi kudzidziswa kwakajairika kubvunza, murabhoritari nzvimbo yekurenda.
Akangwara PD anokurumidza kuchaja, akangwara inverter yakaoma, smart imba, zvishandiso zvemumba zvine hungwaru, zvigadzirwa zvemwenje zvine hungwaru, zvigadzirwa zveruzivo zvemagetsi zvigadzirwa, akangwara odhiyo uye vhidhiyo zvigadzirwa, ekupedzisira-ekugadzira michina yekugadzira, masosi akangwara, zvekurapa zvekushandisa, chengetedzo uye yekuongorora michina kuyera uye kudzora midziyo Mirira.